Akpa Akpụkpọ anụ OEM, Nchịkwa Akpụ Akpụ Akpu | Gaofeng
Factorylọ ọrụ na-elekwasị anya na mmepụta akpa mkpuchi Ruo afọ 20 na ịhụnanya na ọkachamara.
N’ichepụta ụdị akpa na ngwaahịa akpụkpọ anụ niile, inye aka na inye
mgbanwe ọrụ OEM na-agbanwe ndị ahịa.
Ọkachamara Akpa handbag tanned akpụkpọ anụ magnet magnes
Akpa akwukwo nri emeputara akpukpo ahihia emechi https://gfbags.com
Blọ ahịa China na akwa akwa na-arụ ọrụ na-emepụta akwa akpa-
Briefcase nylon akwa multifunction azụmaahịa https://gfbags.com
Kasị mma ozi akpa akpa na-eji akwa akpụkpọ anụ chọọ ya
Kasị mma ozi akpa akpa na-eji akwa akpụkpọ anụ chọọ ya. Messenger akpa akpa eji achọ mma na akpụkpọ anụ Mgbe ọtụtụ ịgagharị na omume, Shenzhen Gaofeng akpa Co., Ltd. ehiwela njikwa sistema mma zuru oke. Ngwaahịa a na - eme ka ọrụ dị mfe ma belata mkpa iji were ọtụtụ mmadụ. Nke a emeela ka mbelata ụgwọ ọrụ ọrụ mmadụ. Messenger Bags naịlị eji achọ mma na akpụkpọ anụ Ngwaahịa a enweghị nchebe iji. Onweghị nsi na ihe nsi eji eme ihe n’usoro ya ma obu ihe eji eme ya mgbe emeputara ya.
Akpụkpọ anụ China na-eji aka mkpuchi microfiber mechie ndị na-emepụta ihe mkpuchi-
Akpụ Akpụ Akpụkpọ aka na-ejikwa mkpuchi mkpuchi akpụkpọ anụ microfiber https://gfbags.com
Na-akparịta ụka banyere mkparịta ụka maka nrụpụta
Ọ bụrụgodi na enwere nzukọ izizi tupu imepụta, mana tupu usoro nke ọ bụla, anyị ka nwere obere mkparịta ụka, gụnyere otu esi etinye ihe a rụpụtara nke ọma, otu esi egbutu ya ga-echekwaba ihe, nsogbu ndị anyị nwere ike iche ihu n’oge nrụpụta. Usoro, anyị ga-elebara okwu niile anya. Nzukọ a na-ebute tupu a na-etinye uche na usoro mmepụta niile, obere mkparịta ụka a na-ezube maka usoro mmepụta ọ bụla, ihe ndị ha na-atụle ga-akọwa nke ọma.
Ihe okike gi ma obu ihe nlere ma obu echiche gi, omumu ihe omumu, guzobe usoro mmepe;
Họrọ akụrụngwa, agba, na usoro njikwa akara ngosi;
Ime nlele, 5.1 Ziga ntinye maka nlele ndi ahia 5.2 Nyocha nnwale;
Kwenye na ndebiri na-abanye n’usoro imepụta. Ọ bụrụ na afọ ejughi gị, laghachi na nzọụkwụ nke abụọ, Making na -emepụta tupu imepụta ma nwalee ihe nlele ahụ;
Mmepụta, Nnwale ngwaahịa ndị emechara, mbukota, mbupu.
Gaofeng gbadoro anya na imepụta ngwongwo akpụkpọ anụ dị iche iche na akpa, wee gbasaa mmepụta nke textiles ndị ọzọ pụrụ iche.Gaofeng dabere n'echiche na ịdị mma bụ ụzọ isi adị ndụ, vvhas na-ejikwa nlezianya na-achịkwa mmepụta. , anyị na-agba mbọ ịdị mma.
Anyị bụ ọkachamara n'inye ndị ahịa anyị ọrụ mgbanwe mgbanwe OEM, ihe karịrị puku square abụọ nke ebe ọmụmụ ihe, Strawing ọ bụla egbochila echiche anyị gbasara ọrụ na ebumnuche nke esthetics.